Cheap and feature-rich Redmi 9C fitness tracker in Nepal - TechPana Tech News Nepal
बिहीबार, भाद्र २५, २०७७ १५:५८
काठमाडाैं । साओमीले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ‘रेडमी नाइन सी’ का साथ नेपाली बजारमा फिटनेश ट्रयाकर ‘मी स्मार्टब्यान्ड फाइभ’ सार्वजनिक गर्दै पहिलो पटक वेयरेबल श्रेणीमा प्रवेश गरेको छ ।
रेडमी नाइन सी मा एआई ट्रीपल क्यामेरा छ, जसले विभिन्न अवस्थामा पनि स्पष्ट तस्वीरहरु खिच्छ । यसमा १३ मेगापिक्सेलकाे मुख्य क्यामेरा, २ एमपी डेप्थ सेन्सर, २ एमपी म्याक्रो क्यामेरा र एलईडी फ्ल्याश छ । एआई सेल्फी क्यामेरा ५ एमपी सेन्सरद्वारा सञ्चालित छ ।
यसमा ५ एटीएम वाटर रेसिस्टान्ट प्रमाणीकरणका साथ उपकरणलाई प्रयोगकताले पानीभित्र वा बाहिर, पुलदेखि ट्रयाक वा पानीको तरंगदेखि शावरसम्म संगै लग्न सक्छन् ।
११ वटा व्यायम मोडहरु सहित इन्डोर साइकलिङ, इलिप्टिकल, योग, रोइङ मेशिन र जम्प रोप सहित मी स्मार्टब्यान्ड फाइभले चाहे तपाईं जसरी कसरत गरेपनि तपाईंको वर्कआउट प्रगतिको विवरण कैद गर्छ ।
रेडमी नाइन सी तीन कलर भेरियन्ट— सनराइज ओरेन्ज, ट्वीलाइट ब्लू र मिडनाइट ग्रेमा उपलब्ध हुनेछ । यो २जीबी+३२जीबी भेरियन्ट रु. १२,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ भने ३जीबी+६४जीबी भेरियन्ट रु. १४,९९९ मा उपलब्ध हुनेछ ।
मी स्मार्ट ब्यान्ड फाइभ रु.४,४९९ मा उपलब्ध हुनेछ ।
यी सबै उत्पादनहरु आधिकारिक मी स्टोर, अनलाइन पार्टनर र रिटेल पार्टनरहरुमा आजैदेखि उपलब्ध हुनेछ ।
पहिलो पटक आईफोन मिनी ल्याउँदै एप्पल !
काठमाडौं । एप्पलले आउँदो महिना (अक्टुबरमा) चारवटा नयाँ आईफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बाहिरिएका